ဘီယာလမ်းကြောင်း - ရထားဖြင့်ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးဘီယာ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဘီယာလမ်းကြောင်း – ရထားဖြင့်ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးဘီယာ
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 04/02/2020)
သင်တစ်ဦးဘီယာကိုနှစ်သက်သည့်ပေါ်တွင်သင်၏စိတ်အားထက်သန်မှုယူရှာကြသည်ရှိမရှိ လမ်း သို့မဟုတ်သင်ထားပြီးအပေါ်ဥရောပခရီးစဉ်များ စာအုပ်များ, ကြည့်ပါ ဦး ရထားအားဖြင့်ဘီယာလမ်းကြောင်း – ရထားဖြင့်ဥရောပအကောင်းဆုံးဘီယာ. သငျသညျစိတျပကျြမညျမဟုတျ! ပိုတောင်ကောင်းသွားပြီ, ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပြုချက်များ၏အသီးအသီးကိုအလွယ်တကူရထားရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်. အဘယ်သူမျှမ မောင်းနှင်မှု လိုအပ်သော, အရာမျှစိုးရိမ်ဆိုလိုတယ်. ရုံပျော်စရာ!
ရထားဖြင့်ဘီယာလမ်းကြောင်း – ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးဘီယာ: အဆိုပါရထားဘူတာမှာ!
သငျသညျနားလည်သဘောပေါက်မပြုစေခြင်းငှါအရာတစ်ခုမှာ, ကြောင်းအကောင်းတစ်ဦးဘီယာဖြစ်ပါသည် ရထားအားဖြင့်လမ်းကြောင်း အများအပြားတွင်တွေ့နိုင်ပါသည် မီးရထားဘူတာ. အဆိုပါရှက်ဖီးကိုအသာပုတ် အကောင်းဆုံးကိုတစျဦးဖွစျသညျ, အကြောင်းကို featuring 30 စည်နှင့်မူကြမ်း - ပြည်တွင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ထင်ရှားတဲ့ဘီယာကနေရွေးချယ်မီးမောင်းထိုးပြအချို့သောအရာ၏. သင့်အနေဖြင့်ရထားပေါ်တွင် get အချို့တို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုသွားပါ ... ဒါမှမဟုတ်ပဲသူတို့ကိုနမူနာကောအချိန်ပိုမိုထားဖြုန်းနေဖို့နိုင်. ဘယ်လိုအေးမြ?!
ရထားဖြင့်ဘီယာလမ်းကြောင်း – ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးဘီယာ: ဘရပ်ဆဲလ်မှာရှိတဲ့ Delirium ကျေးရွာ, ဘယ်လ်ဂျီယံ
ယခု, ဒီငါဘရပ်ဆဲလ်သွားရောက်ခဲ့ပြီး, ငါ့ခင်ပွန်းကိုရှာဖွေတဲ့မစ်ရှင်ခဲ့သောအခါငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးသောတစ်ခုဖြစ်သည် ဥရောပအကောင်းဆုံးဘီယာ. အဖျား: အဆိုပါပန်းရောင်ဆင် Follow!
ကျွန်မအနေဖြင့်မူလကဖွစျပါ၏ တောင်အာဖရိက ဘရပ်ဆဲလ်သွားရောက်လည်ပတ်သောအခါအနည်းငယ်အိမ်လွမ်းသောခံစားခဲ့သည်. ဒါကြောင့်, ငါအိမ်ပြန်ထံမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်ဦးရဲတိုက် Lite ကိုအမိန့်ချမှတ်. ဒါပေါ့, သူတို့စတော့ရှယ်ယာထဲမှာရှိခဲ့! ဤသည်အဖြစ်အံ့သြစရာမရှိပါဖြစ်ပါတယ် delirium ကဖေး ၎င်း၏ရှည်လျားသောများအတွက်လူသိများသည် ဘီယာ စာရင်း, မှာရပ်နေ 2,004 ဇန်နဝါရီလအတွင်းကွဲပြားခြားနားသောအမှတ်တံဆိပ် 2004 အဆိုပါတှငျမှတျတမျးတငျထားအဖြစ် မှတ်တမ်းဂင်းနစ်စာအုပ်. ကမ်းလှမ်းမှုတွင်ကိုကျော်ထံမှဘီယာများမှာ 60 နိုင်ငံပေါင်း!
ဘားအကျပ်အတည်းကို de la Fidelite / Getrouwheidsgang ခေါ်သေးငယ်တဲ့လမ်းကြားမှာတည်ရှိပါတယ်, မှသာစုံတွဲတစ်တွဲရာမီတာ ဂရန်းရာဌာန. အဆိုပါ Jeanneke Pis ရုပ်တုဝင်ဝကနေလမ်းပေါ်ဖြတ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်.
ဘားအမည်ဘီယာထံမှလာ delirium Tremens, အဘယ်သူ၏ပန်းရောင်ဆင်သင်္ကေတကိုလည်းဖီးဝင်ပေါက် decorates.
အဆိုပါမီးရထားဘူတာရုံဖြစ်ပါသည် 10 မှမိနစ်လမ်းလျှောက် ကဖီး, ဒါကြောင့်ကပေါ်ဖြစ်ပါတယ်အံ့ဩစရာမရှိဖြစ်ပါတယ် ရထားအားဖြင့်ဘီယာလမ်းကြောင်း – ဥရောပအကောင်းဆုံးဘီယာ.
ရထားဖြင့်ဘီယာလမ်းကြောင်း – ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးဘီယာ: သင်တို့သည်ရှေး Cheshire ဒိန်ခဲ လန်ဒန်, အင်္ဂလန်နိုင်ငံ
ငါတို့သည်ဤအတူကြွလာသောသမိုင်းကိုချစ် သောက်သုံးလေ့လာရေးခရီး. ရိုးရိုးသားသား, ဒီအရက်ဆိုင်က၎င်း၏အိမ်နီးချင်းများအချို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အကြီးမားဆုံးရွေးချယ်ရေးရှိသည်ပါဘူး. ဒါပေမယ့်အရေအတွက်ထဲမှာကင်းမဲ့သောအရာကို၎င်း၏အရည်အသွေးကိုသမိုင်းကပူးတွဲအတူတက်သည်စေသည်. ဒဏ္ဍာရီကအရက်ဆိုင်ဖြစ်လာခဲ့သည်မတိုင်မီဘုန်းကြီးများ site ပေါ်တွင်ပြသနာတွေကြောင့်ရှိပါတယ်. ရှမွေလသည်ဂျွန်ဆင်နှင့်ချားလ်စ်ဒစ်ကင်းကဒီမှာသောက်, ဒါကြောင့်သင်ဤမှတ်တိုင်မှာသမိုင်းနှင့်အတူဘီယာအရက်ချက်မျှဝေပါလိမ့်မည်.
ထူထောင်မှုသည်လက်ရှိတွင်ကပိုင်ဆိုင်သည် ဆမ်မစ်ဟောငျး Brewery. သူတို့ရဲ့အရက်ဆိုင်လှပသောအဆောက်အဦးများအတွက်တစ်ဦးသွားလာရင်းများမှာ, ရိုးရာ ales နှင့်ပျူငှါနွေးထွေးသောအတွင်းပိုင်း. အဘယ်သူမျှမကြီးတွေအမှတ်တံဆိပ်ရှိပါတယ်, Tadcaster အတွက်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဘီယာကနေဖွင့်တောက်ပဟာယပူဇော်သက္ကာ, Yorkshire.
ရထားဖြင့်ဘီယာလမ်းကြောင်း – ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးဘီယာ: Pilsen အတွက် Pilsner Urquell ဘီယာ, ချက်သမ္မတနိုင်ငံ
အဆိုပါဘီယာကတည်းကခေတ်မီထားပြီးသော်လည်း 1993, ကျန်ကြွင်းသောအိုမင်းမြေအောက်ခန်း၏မိုင် မွေအောကျ အဆိုပါခရီးစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း. တစ်ဦးကမြေအောက် ramble တစ်ပွင့်လင်းသစ်သားကစော်ဖောက်ခြင်းအပေါင်းတို့နှင့် Pilsner Urquell အသက်အရွယ်ရန်အသုံးပြုခဲ့အမျိုးအစားများ၏ကြီးမားသောသစ်သားစည်၏စုံတွဲတစ်တွဲမှာအဆုံးသတ်.
ယင်းအစေးစီတန်းစူပါစည်ကနေဘီယာဖြစ်ပါသည်, အတော်လေးရိုးရှင်းစွာ, ကျနော်တို့အစဉ်အဆက်ကိုမြည်းစမ်းခဲ့ကြသည်အကောင်းဆုံး lager ဘီယာ. တဖန်သင်တို့ကိုယ်အဘို့ထဲကစမ်းသပ်သင့်ပါတယ်! အဆိုပါ Pilsner Urquell ဘီယာတစ်မူထူးခြားတဲ့ခရီးစဉ်ယူရန်သင့်အားဖိတျချေါ. သင်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည် အတှေ့အကွုံ သမိုင်းဝင်မြေအောက်ခန်းထဲမှာစွန့်စားမှုများနှင့်ဖျော်ဖြေရေး, အဆိုပါစိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးလေ့လာသင်ယူနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ lager မြည်းစမ်း, ဒါပေါ့!
ရထားဖြင့်ဘီယာလမ်းကြောင်း – ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးဘီယာ: ဂျာမနီ (မမြူးနစ်)
ငါတို့သည်သင်တို့လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုအပေါ်ထဲမှာပါစေနိုင်သလား? ဂျာမနီမှာအကောင်းဆုံးဘီယာဖြစ်ပါသည် မဟုတ် တွင် မြူးနစ်. ဂျာမဏီခြွင်းချက်ဘီယာတစ်ဦးကြီးမားသောအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်. နေ့စဉ်စိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်အံ့သြလောက်အောင်ကောင်းသောများမှာတိုင်းပြည်တောင်မှအများကြီး. သို့သော်မရတိုင်းဘီယာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နိုင်ပါတယ်, ပင်ဘီယာဒဏ္ဍာရီသည်အဘယ်မှာရှိပွညျ၌. သငျသညျအမြိုးမြိုးကိုရှာနေနေတယ်ဆိုရင် သငျတို့သဇာတ်ကောင်များနှင့် sizzle နှင့်သင်၏ဘီယာကြိုက်တယ်, ကိုယ့်ဟာကိုယ်မျက်နှာသာမ တစ်ခရီးကိုစီစဉ် Bavarian- အပြန်တိုင်းပြည်, ဘီယာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်သည်အဘယ်မှာရှိ ဒေသခံယဉ်ကျေးမှု နှင့်ပြောပြရန်ပုံပြင်များနှင့်အတူစစ်မှန်သောလူများကပြသနာတွေဖြစ်ပါတယ်.
အောက်ပိုင်း Bavaria – Niederbayern
မြူးနစ်ရဲ့အရှေ့မှပိုင်နက်၏ဤလမ်းပိုင်းဟာမှတဆင့်ချဲ့ထွင် ဘာသာစကား Bavarian သစ်တော သြစတြီးယားနဲ့ခကျြခကျြနယ်စပ်နှင့်ဂျာမနီ၏အနည်းဆုံးခရီးထွက်ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးတည်းအောက်ပိုင်း Bavaria အနေနဲ့ဆွဲဆောင်မှုစေသည် ခရီးလမ်းဆုံး, ဒါပေမယ့် သမိုင်း နှင့်ဘီယာယဉ်ကျေးမှုက ပို. ပင်နှစ်သက်ဖွယ်အောင်.
ခုနစ်ဆယ်တဦးတည်းအသေး- နှင့်နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်အရွယ်အစားဘီယာ Bavaria ၏ဤအပိုငျးတှငျအလည်ပတ်. သူတို့ထဲကတချို့ကပြန် 1400 မှယနေ့အထိ. တကျိပ်တပါးသောသူတို့ကိုဖြစ်စေခဲ့ကြ တည်ထောင်ခြင်းအားဖြင့်အသင်းတော်, ကကီးေက်ာင္း သို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်ယ. သုံးနေဆဲဂျာမန် Baron အားဖြင့် operated နှင့်တစ်ကမ်ဘာပျေါမှာအသက်အကြီးဆုံး Abbey ဘီယာဖြစ်ပါတယ်နေကြတယ်. အနိမ့် Bavaria တစ်ဦးက hidden စည်းစိမ်ရှိ၏ အခါဘီယာမှကြွလာ.
ဥရောပအတွက်အကောင်းဆုံးဘီယာ get ချင်? (သင်တန်း၏တာဝန်သိ!) ထိုအခါနှင့်သင်၏ခရီးစဉ်ကိုဘွတ်ကင် တစ်ဦးကရထား Save အဘယ်သူမျှမ peaky ဝှက်ထားအခကြေးငွေရှိပါတယ်, ရာဘီယာပိုပိုက်ဆံဆိုလိုတယ်!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ ဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-beers-route-europe/- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml, သငျတို့သ / fr သို့မဟုတ် / es နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများဖို့ / ကပြောင်းလဲနိုင်သည်.
#ဘီယာ #ဥရောပသမဂ္ဂ #ဘီယာ ဝက်ဝံခရီးသွား ခရီးသွား